Nepali Rajneeti | अध्यादेश फेल गर्ने आँट कसैकाे छ ?
अध्यादेश फेल गर्ने आँट कसैकाे छ ?
फागुण २४, २०७७ सोमबार १०० पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमवार काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो । उहाँले एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद् अवरुद्ध गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सांसदहरूले संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादा विपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउनुभयो । मुद्दा लडेर संसद् पुनर्स्थापना गराएर संसदमा धामी नाच देखाएको आरोप प्रधानमन्त्रीको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफल गर्दा माननीय भनेर अगाडि लेखेको हुन्छ । माननीय भनेर लेखिएजस्तै माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलौँ, छलफल गरौँ न । छलफल गरेको हो कि ? उफ्रेको हो कि ? धामी नाच हो कि ? पार्लियामेण्टमा । हिजो पहिलो दिन औपचारिक रूपमा पार्लियामेण्ट सुरु भएको छ , गुरुरुरु कुदेर आएर बेलमा आएर नारा लगाएका छन्, कराएका छन् ।
के बिग्रियो भन्दाखेरि एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश पेस गर्‍यो सरकारले । फेल गरे भैगो नि सक्छौ भने । फेल गर्ने आँट कसैको छ ? फेल गर्ने आँट छैन, मन पनि छैन । त्यसकारण बेल घेरेर अध्यादेश पेस गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लडेर आएपछि ताजुक देखियो ।’